Ra’iisul Wasaaraha Uganda oo sheegey in Ciidankooda kala baxayaan Somalia, Central Afrika iyo DR Congo (Maxay Tahay Sababta?) – idalenews.com
Ra’iisul Wasaaraha Uganda oo sheegey in Ciidankooda kala baxayaan Somalia, Central Afrika iyo DR Congo (Maxay Tahay Sababta?)
(Xigasho: Wargeyska All African News www.AllAfrica.com): Dowlada Uganda ayaa waxa ay go’aansatay inay kala baxayso ciidamadeeda UPDF ee ku sugan Soomaaliya iyo ciidamo kale oo nabad ilaalin ah ee qaarada Afrika si ay ciidamadeeda u ilaaliyaan xadka galbeed ee ay la leedahay wadanka jamhuriyada Dimuqraadiga Kongo sida ay qortay New Vision.
Ra’iisal wasaare Amama Mbabazi ayaa u sheegay baarlamaanka dalkiisa isagoo ka jawaabayay qoraal ka soo baxay hogaamiyaha mucaaradka dalka Uganda oo ah sida ay dowlada Uganda uga jawaabtay warbixin si hoose uga soo baxday Qaramada Midoobay oo ah in dowlada Uganda ay kaalmo siisay jabhada M23 ee jamhuuriyada dimuqraadiga Kongo. Mr Mbabazi ayaa sheegay in Uganda ay u dirtay wasiir Qaramada Midoobay si uu cabasho ugu muujiyo ereyada loo isticmaalay warbixinta sida qarsoodiga ah uga soo baxday QM ee ah in dalka Kongo ay arrimaheeda ugu lug leedahay iyo sida ay ugu guuldareysteen wadamada reer Galbeedka ah inay aqoonsadaan arrimaha nabadda ah ee ay ka qabatay gobolka.
Warqadan ayay waxa ay dowlada Uganda ku sheegtay in ay la baxayso ciidamadeeda nabad ilaalinta si ay isaga ilaaliso suurtogalnimada in ay weerar ugaga yimaado dalka Kongo iyo wax ay ugu yeertay argagaxisada ay Qaramada Midoobay taageerto.
“Maxaan u sii wadaynaa in Uganda ay caawiso dalal kale iyadoo abaalgudka ay heleyso ay tahay oo kaliya in si xun wax looga sheego? Maxay carruurta Uganda ugu dhimanayaan iyadoo aan heleyno oo kaliya abaalmarin ah xumaan?
Sababtee ayaan ugu martiqaadaynaa Al-shabaab inay aargoosi ku samayso inaan garab taagnaano dadka Soomaaliyeed, waxa kaliya aan heleyno waa warbixino wax xun naloogaga sheegayo oo Qaramada Midoobay soo daabacdo?”ayuu is weydiiyay.
“Kadib markii la tashiyo aan la samaynay walaalaheena Afrikaanka ah ee Midowga Afrika ku jira iyo ICGLR waxaan go’aansanay in aan gebi ahaanba kala baxno ciidamadeena wadamada nabad ilaalinta ah ee ka jooga Afrika sida Congo iyo Somalia,”ayuu yiri Mr Mbabazi.
Ra’iisal wasaaraha Uganda ayaa beeniyey gebi ahaanba eedeymaha loo soo jeediyay sababtoo ah waxa uu ku tilmaamay inay yihiin been.
Hase yeeshee Ra’iisal wasaaraha Uganda Mbabazi ayaa ku xiray labo shuruud inay dib uga laabato go’aanada ay gaartay waxana uu yiri: “Qaramada Midoobay waa inay xumaanta ay ku tilmaantay dalka Uganda kana run sheegto doorka ay Uganda ka ciyaartay howlaha dalalka gobolka,”ayuu yiri.
“Walaalaheena Afrika ee gobolka waa inay si dhaqso ah u canbaareeyaan xumaanta dalka Uganda lagula kacay ee ah warbixinta sida qarsoodiga ah ugaga soo baxday Qaramada Midoobay.”ayuu yiri Ra’iisal wasaarha Uganda Mbabazi. Warkan ka soo baxay Ra’iisal wasaaraha dalka Uganda ayaa waxaa ka doodi doona toddobaadka soo socda baarlamaanka dalka Uganda.
Ciidamada ugu badan ee nabad ilaalinta ah eek u sugan dalka Soomaaliya ayaa waxa ay yihiin ciidamo ka yimid dalka Uganda
Warbixin Xasaasi ah: 10 Wasiir oo 6 ka mid ah yihiin Dam Jadiid oo Sabtida la shaacin doono
Dhageyso:Barlamaanka oo meesha ka saarey in Madaxweynuhu kala diri karo. Gambar gaabanna ugu fariistey ansixiinta Xukuumada u badan Dam Jadiid.